Darpan Nepal – एउटै पुरुषका लागि आमा छोरीको तँछाड मछाड
प्रेम सुनार/असार–२५, बुटवल। समाजमा लुकेका घटनाहरु खोज्न पनि गाह्रो । खोजेर सञ्चार माध्यममा संप्रेषण गर्न पनि लाजमर्दो । तर नउठाएर पनि के गर्नु ? भित्र भित्रै कतिपयको यौनिक चर्तिकलाले समाजका कतिपय सज्जनहरुलाई लज्जीत पारेको छ । सञ्चार माध्यममा उठाई दिए त्यस्तो चर्तिकला गर्न छाड्थे कि भन्ने स्थानिय समाज सेवीको आग्रह छ ।फेरी दोहराईदै छ ‘माछा र कान’को विकृति । घरमा श्रीमतिलाई खोला तिर माछा खान जान्छौं भन्दै ढाँटेर हिड्नेहरुको परस्त्री गमनको कोडभाषा ‘कान खाने ’रहेको छ । त्यसरी कान खान हिड्नेहरु मध्येका केहि भुसे तिग्रेहरु एउटै घरका आमा छोरी ताक्छन । ४० वर्षको नेटो काटेकी आमा आफुलाई मस्त जवना तरुनी ठान्छिन । ‘कान’संगै लोकल कुखरा ढल्छ घरमा ।
‘कान’ प्रेमीहरु भरसक कलिली छोरी, नपाए आमाबाट चित्त बुझाउने मनाशायका साथ पुगेका हुन्छन । नखरमाउँली आमा छोरी सुताउने चलखेलमा हुन्छिन । कुखरे बैंसले उन्मत्त छोरी पनि के कम ? निद्राले अत्ताएको भन्दै आमा सुत्ने भन्दा अलि परको गोठमा सुत्न जान्छिन । भुसे तिग्रेहरु मध्येका एक जना आमा छोरी दुवैको आकर्षणको केन्द्र बनेको हुन्छ ।त्यस ‘केन्द्र’ दुवैको चाहना सम्वोधन गर्ने गरी त्यहाँ प्रस्तुत हुनै पर्छ । पहिला आमालाई सम्वोधन गर्दा छोरी रिसाउने, फेरी छोरीलाई सम्वोधन पहिला गर्दा आमा रिसाउने । यस्तो मुस्कीलमा परेको भुसतिग्रे नम्वर–१ , जता पहिला भए पनि ढाँट्न विवस हुन्छ ।
अन्ततः लोकल कुखराको मासु , मदिराले मस्त भुसतिग्रेहरु मध्ये पुर्व नियोजित र नियमित प्रकृया अनुरुप घर बाहिर आलो पालो प्रणाली अख्तीयार गर्छन । उता छोरी महारानीको ढुकढुकीले थात छाडेर होला गोठबाट ओर्लेर घर भित्र आमा महारानीको चर्तिकलाको चाल सुन्छीन । भित्र वाहिरका कान प्रेमीहरु कोही वाहिर गार्ड बस्छन त कोही भित्र ‘उपहार’ ग्रहणमा हुन्छन् ।छोरी महारानी रिसले चुर हुँदै पुन गोठमा आएर पल्टीन्छीन । अन्ततः जसरी खान खाँदा सवै भन्दा मिठो चोखो लाष्टमा रुचाउने जिव्रामा बानी परेको छ त्यसरी नै ति कलिली छोरी चाख्न पुगिन्छ । गुल्मी स्थित वावु नभएको घर भित्रको यौन विकृति हो यो ।
Previous Post९ बर्षको उमेरमा आँखाको ज्योति गुमाएकी गायिका रेनुका राईले सहयोग माग्दै भनिन्"मलाई पनि हेर्नमन्छ संसार तिमी जस्तै ...(भिडियो सहित) Next Postयौन क्षमता बढाउन यी बानीहरु त्याग्नुहोस् र यसो गर्नुहोस्